သတင်း - သတင်း - လေဝင်လေထွက်စနစ်
သတင်း – လေဝင်လေထွက်စနစ်
လေဝင်လေထွက်စနစ်သည် လေ၀င်လေထွက်စနစ်နှင့် အိတ်ဇောစနစ်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လွတ်လပ်သောလေသန့်စင်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ပိတ်ထားသောအခန်း၏ တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ အခန်းသို့ လေကောင်းလေသန့် ပေးပို့ရန် အထူးစက်ကိရိယာများ အသုံးပြုမှုအပေါ် အခြေခံပြီး အခြားတစ်ဖက်မှ အထူးကိရိယာများဖြင့် ပြင်ပသို့ စွန့်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခန်းတွင်း အသက်ရှူစနစ်ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် ညီမျှသော အိမ်တွင်းလေဝင်လေထွက် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် "လေစီးဆင်းမှုနယ်ပယ်" ကို အိမ်တွင်း၌ ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
1. လေဝင်လေထွက်လုပ်ဆောင်မှု- အသက်ရှူရန်အတွက် လိုအပ်သော လတ်ဆတ်သောလေကို ပေးဆောင်ပါ၊ ညစ်ညမ်းသောလေကို စွန့်ထုတ်ကာ အခန်းကို သက်တောင့်သက်သာနှင့် ချောမွေ့နေအောင်ထားပါ။
2. Deodorizing function- သက်တောင့်သက်သာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မသက်မသာ အနံ့များကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
3. ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်- အိမ်တွင်းလေထုထဲတွင် လွင့်မျောနေသော ဖုန်မှုန့်များနှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို အခြေခံအားဖြင့် အပြင်ဘက်တွင် ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
4. Dehumidification လုပ်ဆောင်မှု- ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း၊ မှို၊ ပုပ်ခြင်း နှင့် အခြားသော ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစိုဓာတ် အမျိုးမျိုးကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး အခန်းကို အေးပြီး ခြောက်သွေ့စေပါသည်။
အထက်ပါအချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သက်သောင့်သက်သာ နေထိုင်နိုင်သော လေဝင်လေထွက်စနစ်သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
လေဝင်လေထွက်စနစ်သည် အောက်ပါပြဿနာများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးပါသည်။
1. အိမ်တွင်းပြုပြင်ရေး ညစ်ညမ်းမှုကို ဖြေရှင်းပါ။
အိမ်အလှဆင်ပြီးနောက်၊ formaldehyde၊ benzene၊ ammonia၊ radon နှင့် အခြားသော အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များ ပါဝင်သော အိမ်တွင်းလေကို အချိန်မီ ပြင်ပသို့ စွန့်ထုတ်သင့်ပြီး သဘာဝ၏ လတ်ဆတ်သောလေကို အခန်းထဲသို့ ထည့်သွင်းနိုင်သောကြောင့် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ကာကွယ်မှုကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောလေကိုတစ်နေ့လျှင် 24 နာရီ။
2. ၎င်းသည် အိမ်တွင်းလေ လည်ပတ်မှု မရှိခြင်း ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
ယခုအခါ အဆောက်အဦများစွာသည် အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အဆောက်အဦများ၏ လေလုံမှုသည် အတော်လေး ကောင်းမွန်သောကြောင့် အိမ်များ၏ လေဝင်လေထွက်ကို မလွှဲမရှောင်သာ ဆိုးရွားလာကာ ယခုအခါ မြို့ကြီးများတွင် အဆောက်အဦများ ပြည့်ကျပ်လာပြီး လေဝင်လေထွက်လည်း ချောမွေ့ခြင်းမရှိပေ။ သင့်အိမ်တွင် လေဝင်လေထွက်စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားပါက အိမ်တွင်းလေထုမလုံလောက်မှုပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အိမ်တွင်းလေသည် ဦးတည်ရာသို့ အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေပြီး ရှူရှိုက်လိုက်သော မီးခိုးနံ့ကို ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ အပြင်ဘက်တွင် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသည်။ တစ်ပတ်ရစ် မီးခိုးငွေ့အတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
4. မိုးရွာသောနေ့များတွင် မှိုမတက်ပါ။
လေဝင်လေထွက်အလွှာ၏ ရွေ့လျားမှုသည် မှိုကြီးထွားမှုကို ဟန့်တားကာ အိမ်တွင် မှိုအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ ပရိဘောဂများနှင့် အဆောက်အဦများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ရှည်စေသည်။
လေအေးပေးစက်မှ လေထဲတွင် အစိုဓာတ်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖယ်ရှားပေးသောကြောင့် ခြောက်သွေ့သောလေသည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း၏ အကျိအချွဲအမြှေးပါးကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်း ကူးစက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤစနစ်၏ အဆက်မပြတ်စိုထိုင်းဆလုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့်အား လေအေးပေးစက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
မိုးရာသီတွင် အိမ်တွင်းအခြောက်ခံထားသော အဝတ်အစားများသည် စက်ပစ္စည်း၏ လေကောင်းလေသန့်နှင့် စိုထိုင်းဆများနေခြင်းကြောင့် သဘာဝအတိုင်း အခြောက်မြန်မည်ဖြစ်သည်။
7.dust removal, sterilization
လေဝင်လေထွက်စနစ်သည် အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပလေကို လည်ပတ်စေနိုင်သောကြောင့် အိမ်တွင်းနှင့် အပြင်ဘက်ကြားတွင် လေလည်ပတ်မှုအခြေအနေကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သောကြောင့် အခန်းအတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုကို အချိန်နှင့်အမျှ ဖြည့်စွမ်းနိုင်ပြီး အခန်းတွင်းရှိ အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှုကိုလည်း ပြင်ပတွင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ ပိတ်ထားသည့်အခါ ထိန်းသိမ်းပါ။ အဆင့်တူ။ ထို့အပြင် ယခုအခါ လေဝင်လေထွက်စနစ်များစွာတွင် ပြင်ပလေကို သန့်စင်ပြီးပါက အခန်းတွင်းသို့ ပြင်ပလေကို ပေးပို့နိုင်ကာ အိမ်တွင်းလေထု၏ သန့်ရှင်းမှုကို သေချာစေရန်အတွက် ယခုအခါတွင် လေကို သန့်စင်ပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပါသည်။
8. ဆူညံသံနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း။
လမ်းမကြီးနှင့်နီးသော အသိုင်းအဝိုင်းအချို့အတွက်၊ ညဘက်တွင် ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ထားလျှင် ပြင်ပမှဖြတ်သန်းသွားသော ယာဉ်များမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဆူညံသံများသည် အိမ်တွင်းသို့ မလွှဲမရှောင်သာ ထုတ်လွှင့်နိုင်ပြီး အနားယူခြင်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။ လေဝင်လေထွက်စနစ်ရှိလျှင် ပြတင်းပေါက်များဖွင့်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ပြင်ပဆူညံသံများကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ၎င်းသည် အခန်းတွင်းသို့ လေကောင်းလေသန့် ဝင်လာကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။